“ရွှေမြန်မာ”: နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ (Ischemic Heart Disease)
ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းသည် ရံဖန်ရံခါ ဘယ်ဘက်ပုခုံးနှင့် ဘယ်ဘက်လက်မောင်းသို့၎င်း၊ လည်ပင်း နှင့် မေးစေ့တစ်ဝိုက် သို့၎င်း ပြန်နှံ့နာကျင် တတ်ပါတယ်.. ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းသည် ရုတ်တရက် ပြေးလွှားခြင်း၊ အားစိုက်အလုပ် လုပ်ရခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တတ်ပြီး အများအားဖြင့် စက္ကန့်(၃၀)မှ (၅)မိနစ်ထိ ကြာတတ်ပါတယ်.. အနားယူပါက သက်သာလာပါတယ်..
တိရိစ္ဆာန်အဆီများ၊ နီသောအသား၊ ကြက်ဥ၊ မလိုင်ပါ နွားနို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများ အစရှိသည့် ကိုလက်စထရော ကြွယ်ဝသော အစားအစာများကို ရှောင်၍ ဟင်းသီးဟင်းရွက် အသီးအနှံများ၊ မလိုင်ထုတ်ထားသော နွားနို့၊ ငါး၊ ကြက်ဘဲအသားများ၊ ဂျုံ ပြောင်း လူး ဆပ် ကဲ့သို့အနှံများ စားသုံးပါ..
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် နှလုံးသွေးကြောတွင်း အောက်စီဂျင် ပို့ဆောင်မှုကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေသဖြင့် လုံးဝရှောင်ကြဉ်ရန်..
သင့်တင့်သော ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဆောင်ရန်..
သွေးတိုးနှင့် ဆီးချိုသွေးချို ရောဂါ ရှိပါက ရောဂါအတွက် ညွှန်ကြားထား သည်များကို လိုက်နာရန်..
Nitrates (Nitroglycerin..), Betablockers (propranolol, metoprolol...), Calcium channel blockers (Amlodipine, diltiazem...) စသည့် နှလုံးသွေးကြောကျယ်စေရန်နှင့် နှလုံးခုန်နှုန်း၊အောက်စီဂျင် လိုအပ်မှုကို ထိန်းချုပ်ပေးသောဆေးများ ။
သွေးခဲခြင်းကိုတားဆီးပေးသောဆေးများ ie. Aspirin (Aspilet),.....။
သွေးတွင်းကိုလက်စထရော များနေပါက ကျစေသောဆေးများ ie. Statins (Atorvastatin, Simvastatin,....)။
ခွဲစိတ်ကုသမှုအနေဖြင့်-နှလုံးသွေးကြောလမ်းလွှဲတည်ဆောက်ခြင်း (Coronary Bypass) နှလုံးသွေးကြောချဲ့ခြင်း (Angioplasty) စသည့် ခွဲစိတ်နည်းများဖြင့်လည်း နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါကို ကုသနိုင်ကြောင်း ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါတယ်..။
ကျွန်မမှာ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းတဲ့ရောဂါဖြစ်နေပြီလို့ အီးစီဂျီရိုက်ပြီး ဆရာဝန်ပြောလာခဲ့တော့ တော်တော်စိတ်ညစ်သွားတယ်။ ခုတောင် ဒီရောဂါအကြောင်းကို သေချာသိချင်လို့ အကိုဝင်းသိန်းကို အကူအညီတောင်းလိုက်တာ။ သူက သူ့ဆိုက်ဒ်မှာ တင်ပေးလို့ ပြန်လည် တင်ပြလိုက်တာပါ။ ဆေးကတော့ သွေးကျဲဆေးကို မသောက်ချင်ဘူး။ အရမ်းချိုတယ်။ စိတ်ညစ်လိုက်တာ အရမ်းပဲ။ ခုတော့ ဆေးက မသောက်ချင်လည်းသောက် သောက်ချင်လည်းသောက်ပေါ့။ ကျွန်မလို ရောဂါမဖြစ်ခင် ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်အောင် ပြန်လည် တင်ပြပေးချင်းဖြစ်ပါတယ်။ အကိုဝင်းသိန်းကိုလည်း ညီမလေး ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော်။ ညီမလေး အီးစီဂျီကိုလည်း စကမ်ဖတ်ပြီး အကို့ဆီ ပို့ပေးပါမယ်။
Linght of Buddhism said... @6November 2008 at 16:55
အစ်မရေ.. အကြံလေး ပြုချင်ပါတယ်။ ခွင့်ပြုမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီရောဂါအပေါ်မှာ စိတ်အစွဲလမ်းကြီး မဖြစ်စေချင်ဘူး။ စိတ်ကြောင့် ကိုယ်ဆင်းရဲဆိုသလိုဖြစ်မှာစိုးလို့။ ဒီတော့ ၀ိပဿနာတရား အားထုတ်စေချင်တာပါ။ ဘာကြောင့်လဲ.. ရောဂါပျောက်စေချင်လို့လား..မဟုတ်ပါဘူး..ပျောက်တာမပျောက်တာက ရှိပါစေ။ ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာ ဒိဋ္ဌဓမ္မ သုခ၀ိဟာရ ဘ၀ိဿတိ---စိတ်အေးချမ်းနေလို၍ တရားရှုပါသည် ဆိုသလိုပေါ့။ အစ်မကို စိတ်အေးချမ်းစွာ ဘ၀မှာ နေနိုင်စေချင်တဲ့သဘောပါ။ ဒါအပြင် လာဘ(လဘ်ရခြင်း)၊ သက္ကာယ(အရိုအသေပေးခံရခြင်း)၊ သိလောက(ကျော်ကြားခြင်း)ဆိုတာလေးတွေပါ ရှောင်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ဘ၀မှာ ငြိမ်းချမ်းစွား ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာ အစ်မ ကျေကျေနပ်နပ် သိမြင်သွားမှာပါ။ ကျွန်တော်အမြင်လေးပေါ့နော်။ ၀ိပဿနာဆိုတော့ နည်းနည်းခက်တယ်မထင်ပါနဲ့ ရုပ်နာမ်ဖြစ်ပျက်ပုံလေး သိအောင်လုပ်လိုက်ပါဦး။ ပြီးတာနဲ့ ရှုမှတ်ပွားများကြည့်ပါ။ အစ်မ အစစ အရာရာ အဆင်ပြေချောမွေ့မှာပါ။ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ။
Dr. Win Thein said... @ 8 November 2008 at 14:50
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အခုမှပဲ ရေးနိုင်တော့တယ်.. မနေ့ညကထဲက comment ပေးဖို့ဟာ ဒီနေ့နေ့လည်မှပေးလို့ရတာ.. ဘလော့ဂ်က မကျော်ရပေမယ့် comment က ကျော်ပြီးမှ ရတာ..အီးစီဂျီလည်းကြည့်ပြီးပါပြီ.. ရှိတယ်လို့ ပြောလို့ရယုံပါပဲ.. Septal Ischemia ပါ.. တကယ့်ဆိုနိုင်ရုံမပြောစလောက်ပါ..စိတ်ထဲမှာ မစွဲလမ်းစေချင်ဘူး.. aspilet ပဲသောက်နေပါ.. ချိုလည်း နောက်တော့ ကျင့်သားရလာလိမ့်မယ်.. ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အရသာနဲ့ တွဲစားကြည့်ပေါ့.. အမောင်(ရေနံ့သာ)ပြောသလို လုပ်ပါ..ဝိပဿနာမလုပ်နိုင်သေးတောင် ရှုမှတ်ရုံနဲ့ သိသိသာသာ စိတ်အေးချမ်းမှုရလာပါလိမ့်မယ်.. Stress နည်းသွားတာပေါ့.. ကျန်းမာရေးရာ ကိစ္စတွေ ရှိရင်လည်း အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်ပါ.. ကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေ ညီမလေးရေ..